Haweeney Boolis ah oo dab isku qabadsiiyay Countiga Homa Bay – The Voice of Northeastern Kenya
Haweeney Boolis ah oo dab isku qabadsiiyay Countiga Homa Bay
Haweeney katirsaneed ciidamada booliska kuwa loo yaqaano Maamulka ee AP-da ayaa lagu soo waramaya in ay isku dishay Countiga Homa Bay xili la doonayay in maalinta berito ay shaqada ku soo labato kadib marka ay muddo fasax ahayd.
Askariyadan oo magaceeda lagu sheegay Judith Gallant ayaa wararka sheegayaan in ay isku gubtay gurigeeda xilli laba caruur ah oo uu dhashayna ay sidoo kale ku geeriyooden dabkaasi kadib markii dabka ay isku qabadsiise meel u dhow caruurtaasi.
Dadka deganaa goobta ay sarkaladaas ciidamada katirsaneed ay isku dishay oo si aad ah oga argagaxay falkan ayaa sheegen in ay isku dayeen sidii caruurtaas ay u badbaadin lahaayen balse haweeneydaas ayaa marki hore guriga kor iskaga soo xirtay taas oo ku adkaatay dadka deeganka in ay si dhaqsa ah u xakameeyan.
Mid kamid ah askari ay saaxibo ahaayen sarkaaladaas is dishay oo lagu magacaabo Micahel Mutonyi ayaa sheegay in Ms Judith Gallant laba bilood ka hor laga soo wareejiyay Magaalada kisumu islamarkaana loo soo qaaday Countiga Homa Bay oo ay ka howlgali jirtay ka hor inta aysan dabka is qabadsiinin.
Lama oga ilaa iyo hadda sababta dhabta ah ee ka dambeysay a in ay isku gubto wallow hadda laamaha amaanka ay bilaaben baaritaan qoto dheer oo la xariirta sidii lagu ogaan lahaa sababti ay isku gubtay.
Intabadan ciidamada booliska ayaa loogu baaqa in ay la tashadaan madaxdooda ka hor inta aysan qaadan talaabooyin khasaaro dhalin karaa hadii ay jiraan waxyaabo ay qonsadaan.
← Hoggaamiyaha xisbiga Ford –Kenya Moses Wetangula oo sheegay in uu la shaqeynayo madaxda galbeedka Kenya
Mas’uuliyiinta gobolka xeebta oo cambareeyay howlgal lagu togtay dabley katirsaneed Kooxda Alshabab →